युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन ड्राइभिङ तालिम::Online News Portal from State No. 4
युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन ड्राइभिङ तालिम
बागलुङ, २४ माघ – बेरोजगार युवाहरुका लागि बागलुङ नगरपालिका ६ नं. वडा कार्यालयले एक महिने सिपमुलक तालिम सुरु गरेको । वडाका वेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ ५० जना युवालाई स्वरोजगारमुलक ड्राइभिङ तालिम दिन थालिएको वडा अध्यक्ष खेमराज सापकोटाले वताउ । वडा कार्यलयको २ लाख आर्थिक सहयोग तथा प्रशिक्षार्थीको करिव १ लाख ५० हजारको लगानीमा उक्त तालिम सुरु गरिएको हो । १ महिनासम्म संचालन गरिने तालिम बागलुङको कालीगण्डकी ड्राईभिङ इष्टिच्युटमा हुनेछ ।
तालिमको विहिबार उद्घाटन गर्दै बानपा ६ का वडा अध्यक्ष खेमराज सापकोटाले अहिलेको विकाससग घुल्न सक्ने सिप सवैमा हुनु पर्ने भएकोले युवालाई लक्षित गरि तालिमको दिन लागेको बताए । कुनै पनि काम र सिप सानो ठुलो नहुने भन्दै यहा सिकेको सिपलाई व्यवहारमा उतारेर युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न आग्रह गरे । वडाको यो कार्यलाई यहाँका युवाहरुले अवसरको रुपमा लिएका छन ।
वेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य लिएर ड्राइभिङ तालिम सुरु गरेकाले खुशी लागेको सहभागी भगवान केसीले बताए । उनले तालिमबाट सिकेको सिपलाई पुर्ण रुपमा व्यवहारमा लागु गर्ने बताए । ड्राइभिङ तालिम वेरोजगार युवाको लागि प्रयाप्त नभए पनी केहि युवाको लागि स्वरोजगारको बाटो बन्ने सहभागीले बताएका छन् । अहिले ड्राईभिङ तालिम दिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा अरु भिन्न किसिमका तालिम संचालन गर्दै जानुपर्ने वताए । कार्यक्रममा कालिगण्डकी ड्राईभिङ इष्टिच्युटका संचालक नारान कार्की र प्रशिक्षक मोहन केसी लगाएतले शुभकामना मन्त्यव्य राखेका थिए । इष्टिच्युटका अध्यक्ष सागर गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए ।